I-Uhans U300, ixabiso eliphantsi kwi-4GB ye-RAM kunye ne-32GB yeROM | Iindaba zeGajethi
I-Uhans U300, ixabiso eliphantsi kuyo yonke i-4GB ye-RAM kunye ne-32GB yeROM [UHLAZIYO]
Sikuzisa olunye uphononongo, kuba yile nto uyithandayo, ukuba sikuxelele ngokwakho ukuba ziziphi iimpawu kunye neendaba zezixhobo ezikhoyo kwimarike yangoku. Kule meko, siza kuthetha ngegama elaziwayo apha, i-Uhans. Inkampani yaseTshayina isizisela kwesi sihlandlo isixhobo esingaqhelekanga kodwa esabelana ngesici esifanayo nabazalwana baso bonke, ixabiso eliphantsi kakhulu. Asifutshane kwinkcazo nokuba, kwaye kunjalo I-Uhans U300 isinika i-4GB ye-RAM kunye ne-32GB yokugcina ngaphantsi kwama-euro angama-200. Hlala kwaye siza kukuxelela ukuba yintoni eyenza le fowuni ikhetheke kangaka.
Siza kuhamba inyathelo nenyathelo, sihlalutya nganye yeenkcukacha ezifanelekileyo malunga nale Uhans U300, nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuyibona kuqala, sikushiya ividiyo yoqwalaselo kunye nokungabikho kwebhokisi esiyenzileyo, apho ungabona khona ukuba kwenzeka njani ngokuhambisa usetyenziso.
1 Uyilo, uya kuyithanda okanye uyithiye
2 Ukucaciswa kunye neempawu
3 Ukuzimela kwenkqubo kunye nokusebenza
4 Uluvo lomhleli kunye nemixholo yebhokisi
Uyilo, uya kuyithanda okanye uyithiye
Yomelele, inengcwangu kwaye inesibindi. Ngale ndlela ndingachaza uyilo lwale Uhans U300, isixhobo esiphathwayo esisothusa ngogudileyo, sishiya iglasi yeklasi ye-2D eyayisebenzisa i-Uhans phantse kuzo zonke izixhobo zayo ukuza kuthi ga ngoku. Umva ulahla umhlathi, ukudibanisa indawo engwevu engwevu ejikeleze inzwa yekhamera kunye isivamvo somnwe. Kwakunye nembasa yesinyithi enophawu lweUhans emazantsi.
Nangona kunjalo, konke oku kuyilwe ngasemva kwesikhumba, ewe, uvile ngokuchanekileyo, sisikhumba sokuqala, ubuncinci ukubamba kunye nevumba elichonga njalo.
Umxube okhethekileyo okwahlukileyo kwimiphetho yealuminium, uhlobo lwangaphandle lwento ebotshelelwe kwisisu semoto ngezikhonkwane. Kwelinye icala, icandelo eliphezulu nelisezantsi linemiphetho yerabha, kuzo, sinako ukususa iziciko eziza kukhulisa zombini 3,5 mm jack phezulu, njenge-microUSB ngasezantsi. Ngale ndlela, sinokuqhubeka nokugcina ukumelana ne-IP65 eqinisekisiweyo.
Masiqale ngeenkcukacha zobugcisa bangaphakathi. Sifumana iprosesa I-MediaTek MT6750Ngokuqinisekileyo ayisiyonto inamandla, iprosesa esezantsi yesixhobo esinexabiso eliphantsi. Nangona kunjalo, ulungelelaniswe ngokugqibeleleyo kunye nento engekho ngaphantsi 4GB ye-RAMNgale ndlela siya kuba nokulula ukuqhuba naluphi na uhlobo lwesicelo ngaphandle kokubandezeleka kukuhamba kancinci kwe-Android. Asilibali imemori ye-32GB yeROM (yokugcina) ukuze ugcine kancinci kuyo yonke into.
Siyaqhubeka nebhingo ngepaneli yangaphambili, sifumana isikrini se 5,5 intshi, kunye HD isisombululo Full Ibonisa ngokwaneleyo kwaye ukuya kuthi ga ngoku, uluhlu lokwahluka olunokuthi mhlawumbi lubonelele ngento ebhetele, kodwa asinakulindela okuninzi ngakumbi. Inobume obusondeleyo kunye nokuqaqamba kokuqaqamba kunye ikhamera yangaphambili engekho ngaphantsi kwe-5 MP, eneenkcukacha ezifanelekileyo, kwaye yiyo enye yezixhobo ezimbalwa eziphathwayo ezinefayile ye- Ikhamera engaphambili, Ngaphandle kwamathandabuzo uza kuthatha iiselfie zodidi. Ewe kunjalo, ukuba awusebenzisi naluphi na uhlobo lomkhuseli wescreen, usebenzisa leyo inkampani ebolekisayo kuthi sifumane uninzi lweengxaki zeflash.
Ngasemva sinomfundi ofunda iminwe ovula isixhobo okokuqala kwaye othe kamnandi. Kwelinye icala, ikhatshwa yikhamera engenanto ingaphantsi 13 MP, Isenzi senzwa sikaSony esizikhusela kakuhle kwiimeko eziqhelekileyo zokukhanyisa kwaye sibonisa ukukhanya kwetoni edume ngoku namhlanje.
Ngokumalunga nokunxibelelana, akukho mkhondo we-NFC, ngenxa yezizathu ezicacileyo, kodwa sineBluetooth 4.0, unxibelelwano olubanzi lweWiFi kunye nonxibelelwano lwenethiwekhi 4G yaseSpain, Into enokubulela kwisixhobo esinemvelaphi yaseTshayina kwaye kula maxesha. Ngokukodwa ukwazi ukuba ine-DualSIM tray eya kusivumela ukuba sisebenzise i-nanoSIM kunye ne-microSIM ngaxeshanye.
Ukuzimela kwenkqubo kunye nokusebenza
I-Uhans idibanise esi sixhobo Android 6.0 ngokucocekileyo, asizukufumana mkhondo we-classic opharetha okanye umenzi wezicelo. Kwakhona, ilungele ukufumana i-Android 7.0 kwixa elizayo. Ke ngoko, uya kuba nayo yonke imisebenzi, kunye nezinye u-Uhans abone kufanelekile ukuzongeza kodwa, ngaphandle kwamathandabuzo, siza kuzisebenzisa. Iza neVenkile yokuDlala kuGoogle efakelweyo kwaye ulwimi lwesiSpanish luyafumaneka, ziya kuba zizo zonke izibonelelo.
Malunga nokuzimela, Sifumana i-4.750 mAh yebhetri, ngokusetyenziswa kwethu kusiqinisekisa ubuncinci usuku olunesiqingatha okanye iintsuku ezimbini zokusetyenziswa. Yonke into iya kuxhomekeka ekubeni ubeka nzima kangakanani ukuyikhupha.
Ngokuphathelele ekusebenzeni ngokubanzi kwenkqubo, inyani kukuba i-Uhans U300 ibambe kakuhle. Uyakwazi ukuqhuba okwangoku kwimidlalo yevidiyo, ngaphandle kokuba i-FPS ayizukufana ncam nesuti yakho eyomeleleyo. Into entle ngayo 4GB ye-RAM kukuba izakuhamba kakuhle kuzo zonke iintlobo zemisebenzi, kodwa ayizukuma ngokuchanekileyo ngenxa yeGPU yayo. Iprosesa ilungile, kwimisebenzi yemihla ngemihla, kuninzi.
Enye into enomdla kuyo ukhuseleko IP65 oko kuyasikhusela ekutshazeni nothuli, yiyo loo nto amakhonkco egqunywe ngamabhanti erabha.
Uluvo lomhleli kunye nemixholo yebhokisi
Ibhokisi ye-Unans U300 ibandakanya ezi zinto zilandelayo:
Isitshixo sedipozithi yeSIM
Umkhuseli wesikrini (ifilimu)
Ngokuqinisekileyo, ukuba ufuna isixhobo esinexabiso eliphantsi, sicebisa le Uhans U300, ngexabiso lehlazo, kwaye uya kuyifumana ngokulula APHA kwiwebhusayithi yayo engezantsi kwe- € 200. Ezinye iindawo ezinje ngeGearbest zikwabonelela ngexabiso eliphantsi rhoqo. Okokugqibela, khankanya ukuba i-Uhans iyasebenza izixhobo ezinikezelwa kwiphepha lakho le-Facebook, Ungalahli eli thuba.
Umboniso opheleleyo weHD
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Uhans U300, ixabiso eliphantsi kuyo yonke i-4GB ye-RAM kunye ne-32GB yeROM [UHLAZIYO]
IWolder ikushiya ngaphandle kwezizathu, sazama iiglasi zakhe zeVR kwaye zilinganisa
Ukuvuza okutsha okunxulumene neXiaomi Mi6